Madaxweyne Farmajo “Shirkii Garowe guul ayuu ku soo dhamaaday mana fashilmin “ – Kalfadhi
Madaxweyne Farmajo “Shirkii Garowe guul ayuu ku soo dhamaaday mana fashilmin “
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay Khudbad ka jeediyay munaasabad loogu dabaal-dagayay 15-ka May ayaa weerar Afka ah ku qaaday Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf). Sidoo kale waxa uu faah faahin ka bixiyay Shirkii natiijo la’aanta ku soo dhamaaday ee magaalada Garowe.
Madaxweynaha ayaa sheegay in arinta Galmudug ay Dowladda ku talisay in wadahadal laga galo kadib markii uu Xaaf soo jeediyay in muddo kordhin loo sameeyo taasna ay dowladda iyo dadka daga Galmudug u cuntami waysay.
“Arinta Galmudug waxaan ku talinay in wadahadal laga galo markii la waydiistay muddo kordhin waxaa isku raacay maamul Gobaleedyada iyo Xaaf balse markii uu wadatashi geliyay waa nagu soo celiyay” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
“Annaga waan isku daynay inaa sameyno tanaasul iyo wadashaqayn waxaan kaloo ku talinay in dadka daga Gobalka dib u heshiisiin loo qabto oo ay go’aan ka gaaraan doorashada Galmudug” ayuu yiri Maxamed C/llaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya.
Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sheegay in uusan marna ogolaan doonin muddo korarsi Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamul Gobaleedyada dalka balse uu diyaar u yahay inuu wada-xaajood ka galo dhamaan tabashooyinka kale ee maamul Gobaleedyada dalka ay ka qabaan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
“Ma ogolaan karno muddo kordhin Maamulada iyo DF-ka, Madaxweyne Xaaf waa diiday daawadii aan u qornay, qof xanuunsan oo aan daawo qadaneyn waa dhib badan tahay” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo. “Hadii idinla yiri Galmudug lama xalin waa been, Galmudug waa la xaliyay laakiin wixii waqti korarsi ah waa go’aan u yaalla Shacabka Galmudug” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Dhinaca kale Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ka hadlay Shirkii natiijo la’aanta ku soo dhamaaday ee Todobaadkii hore lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Madaxweynaha ayaa sheegay in shirkaasi uusan natiijo la’aan ku soo dhamaanin faa’idooyin badanna ay ka soo baxeen.
“Shirkii Garowe waxa uu ku soo dhamaaday wax wanaagsan, lama rabo in wax daran la sheego, in madaxda Soomaaliyeed ay kulmaan wadahadlaan waa talaabo wanaagsan” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya. “Annaga waxaan soo jeedinay in shirka looga hadlo arimaha amniga maadaama ay dhibaato badan ka jirto amaanka, madaxda maamul Gobaleedyada arintaas waa nagu diideen” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in arinta siyaasadda oo ah barnaamij ballaaran ayna ku raaceen balse ay madaxda Maamul Gobaleedyada ku bilaabeen sidii ay ku furan lahaayeen Madal Furan taasna aysan Sharci aheyn.
“Madal in la sameesto dastuurkaynna kuma qorna wax aan dastuurka ku qorneen sharci ma’ahan” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Xasan Sheekh Maxamuud“waa in laga fekeraa maxaa 30 sano oo dib udhac ah geliyay Soomaaliya, hadase maxaa diidan in laga baxo”
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo ku baaqay in la dayactiro Buundada Ceelgaal